समृद्धिका लागि नारी - विचार - नारी
समृद्धिका लागि नारी
ठूल्ठूला विकासका काममा नारी सहभागिता, संविधानमा नारी हक–अधिकार, सरकारमा नारी सहभागिता आदि कुरा समेटिएर, नारी सहभागिता बढ्दै गएको भए पनि अझै छोरा र छोरी जन्मदा आमाको मुहारमा झल्कने स्वभाव र संवेदनाको विभेद हटिसकेको छैन ।
समृद्धि शब्द अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देशलाई नयाँ युगको बाटोमा हिँडाउन र नयाँ आयामले विकासको अनुभूति दिलाउन एउटा गहन अर्थ बोकेर प्रस्तुत भएको छ । भाषणमा समृद्धि, कागजमा समृद्धि, ठाउँठाउँमा समृद्धि जोकसैलाई यो शब्द र यसको मर्मले आकर्षण गर्न थालेको महसुस हुन्छ । दशकौंदेखिको अस्थिरतालाई यही समृद्धिको नाराले किनारा लगाउला अनि नेपाल र नेपाली हुनुको गर्व महसुस गराउला भन्ने सबैमा एउटा अपेक्षा पनि छ । यद्यपि समृद्धिको परिभाषा कसरी लगाउने ?
समृद्धिलाई कुन क्षेत्रबाट कसरी अनुभूति गर्ने ? यसले अझ गहन मर्म आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाजको संस्कार, परिपाटी, कुरीति, आवश्यकता, अधिकार, स्वतन्त्रता, सुख, शान्ति र आनन्दित जीवनशैलीजस्ता मानव जीवनका बहुआयाममा अनुभूति गर्नुपर्ने समृद्धि नारी सहभागिता र नारी सम्मानविना सम्भव छैन । किनभने प्रत्येक घरबाट छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य नहुँदासम्म आन्तरिक शान्ति र आत्मसम्मान प्राप्त हुँदैन । आत्मसम्मानविनाको समृद्धिको के अर्थ हुन्छ र ? ठूल्ठूला विकासका काममा नारी सहभागिता, संविधानमा नारी हक–अधिकार, सरकारमा नारी सहभागिता आदि कुरा समेटिएर, नारी सहभागिता बढ्दै गएको भए पनि अझै छोरा र छोरी जन्मदा आमाको मुहारमा झल्कने स्वभाव र संवेदनाको विभेद हटिसकेको छैन ।
अरुले के भन्छन् भन्ने कुरामा चासो नराखी एउटी आमाले जन्मिएको दिनदेखि छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टि, छोरा र छोरीलाई हुर्काउने तरिका, छोरा र छोरीलाई दिने प्राथमिकता, छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षाको शैली र सोचमा परिवर्तन आएको छैन । अंश र वंश छोराविना चल्दैन भन्ने मान्यता र धारणामै परिवर्तन आउन सकेको छैन भने समृद्धिको अनुभूति कसरी गर्ने ? नारीले नै नारीको संवेदना बुझ्न सक्ने विवेकको वृद्धि भएको पाइँदैन हाम्रा घर तथा समाजमा ।
करोडौंको संख्यामा केही प्रतिशतमा यी मान्यतामा परिवर्तन आएका होलान् र छोरीहरूले छोरासरह अवसर, सम्मान र प्रेम पाएर जीवनलाई धन्य मानेका होलान् तर यतिले मात्र देशको समृद्धिमा कुनै योगदान गर्न सक्दैन । असमानता र विकृत मानसिकता बोकेर हुर्किएको समाज र घरमा छोरा र छोरी समान अस्तित्व लिएर सिर्जना भएका आफ्ना सन्तान हुन् भन्ने बोधको विकास नहुँदासम्म विसंगति रोकिएर समृद्धि आउने सम्भावना रहँदैन ।
छोरीलाई शिक्षित बनाए आत्मनिर्भर बन्न सक्छिन् भनेर होइन छोरी पढाए गतिलो घरमा, पढेलेखेको केटाले विवाह गर्छ भन्ने धारणा अझसम्म छ । छोरीलाई शिक्षा नै दिए पनि आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा दिइएको छैन । छोरीले पाएको शिक्षाअनुसार उसको उपादेयता र उपयोगिताको मूल्यांकन गरिँदैन र वास्तवमा भन्नुपर्दा शिक्षित नारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको भरपुर उपयोग गर्ने अवसर नै पाएका छैनन् हाम्रो समाजमा । किनभने तिमी छोरी हौ भन्ने भनाइ हरेक बाआमाको मुखमा झुन्डिएको छ र अझ विशेषगरी बुवालाई भन्दा आमालाई नै आफ्नी छोरी आत्मनिर्भर बनेर स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्छिन् भन्ने विश्वास छैन । सचेतना, जागरण र कुरीतिको अन्त्य भनेर जति भाषण गरे पनि, नारा लगाए पनि व्यावहारिक रूपमा सचेत र जागृत नहुँदासम्म विभेदको अन्त्य सम्भव छैन ।
जबसम्म विभेद रहन्छ तबसम्म समृद्धिको अनुभूति गर्ने कुनै गुन्जायस रहँदैन । हामी भन्छौं समाजमा परिवर्तन आउनुपर्छ । हामी बस्ने समाजमा परिवर्तन कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ ? अवश्य घरबाट तर हामीले आजसम्म पनि विभेदको संस्कार र प्रचलनलाई अन्त्य गर्न सकेका छैनौं । बिहान उठ्ने बेलादेखि सुरु हुन्छ हाम्रो घरमा छोरीको कोठा ढकढक्याउँदै छोरी तिमी अहिलेसम्म उठेकी छैनौ ? हेर त छोरी भएर अबेरसम्म सुतेको ? भोलि विवाह गरेर कर्मघर गएपछि पनि अबेरसम्म सुत्ने बुहारीलाई अलच्छिनी भन्छन् । छोरी जाऊ भान्सामा गएर चिया पकाएर ल्याऊ किनभने तिमी छोरी हौ । छोरीले सबै काम सिक्नुपर्छ । छोरी भाइलाई तयार पार, खाजा–पानी, झोला मिलाइदेऊ, स्कुल जान हतार हुन्छ । छोरी स्कुल जाँदा बाटोमा भाइको राम्रो ख्याल गर है ।
७–८ वर्षकी हुन् वा १८–२० वर्षकी छोरी हामी यस्ता कुरा दिनहुँ भनिरहेका हुन्छौं । २–३ वर्षको अन्तराल रहेका छोराछोरीबीच पनि हामी छोरीले नै सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छौं । खाना पकाउन, कोठा मिलाउनदेखि लिएर पाहुना आउँदा सत्कार गर्न र चिया ल्याउन सिक्नुपर्छ छोरीले । किन यी सबै काम छोराले सिक्नुपर्दैन ? सबै काम जाने छोरालाई सजिलो हुँदैन र ? अवश्य सीप भन्ने कुरा छोराले पनि जान्नुपर्छ ताकि उसको जीवनमा जे–जस्तो परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्न सकोस् तर छोराले नजाने पनि नसिके पनि समाजले केही भन्दैन । छोरीले नजान्दा समाजले पनि भन्छ । यो अरूका लागि जान्नुपर्ने र थाहा पाउने कहिलेसम्म ? समाजका लागि हामीले हाम्रा छोरीलाई छोरासरह कहिले व्यवहार गर्ने ?
भर्खर विवाह हुनासाथ पारपाचुके भयो भने घटना केटा पक्ष र केटी पक्ष दुवैका लागि बराबर हो तर जति केटी पक्षका बाआमालाई यो घटनाले असर गर्छ त्यति केटा पक्षलाई नगरेको पाइन्छ । मर्द हो छोराले अर्को विवाह गर्छ भन्ने धारणा घरका बाआमा र समाजको पनि हुन्छ भने ल हेर त छोरीको जात एकपटक सम्बन्ध बिग्रिएपछि अब जीवन बिताउन कठिन हुन्छ–यही कुरा सुनिन्छ समाजमा । नारीहरूबाटै यस्ता कुरा सुन्नमा आउँछन् । समाजकै कारण आमालाई छोरीको त्यति नै चिन्ता परेको हुन्छ । मेरी छोरी पनि प्रतिभाशाली छे, पढेलेखेकी छे, आफ्नो खुबीले गरेर खान्छे भनेर आत्मविश्वास जगाउने काम गरिएको पाइँदैन । विवाहमा कर्म पुर्‍याउँदा होस् वा छोरीको घरतिरकाको सत्कारमा छोरी पक्ष जहिले सजग र झुकेकै हुनुपर्ने चलन छ । सम्बन्ध जोडिएपछि एक–अर्कामा बराबर प्रेम र सद्भाव भए पो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, अपनत्व महसुस हुन्छ । यदाकदा बाहेक छोरीको पक्षलाई धेरै पक्षबाट भार बोकाइरहेका हुन्छन् छोराका तर्फबाट ।
बलात्कारकै घटनामा केटाहरू मज्जाले विनाडर समाजमा खुल्लेआम हिँडिरहेका हुन्छन् भने केटीको इज्जत गए बराबर गर्छ समाजले । यी कुरालाई छोरीका आमाबुवाले निर्धक्क स्वीकार गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तै कयौं घटना र उदाहरण छन् जहाँ छोरी भन्नासाथ खुलेर हिँड्न, आवाज उठाउन र निर्धक्क जीवन बिताउन पाइरहेका हुँदैनन् छोरी हुन् वा छोरीका बाआमा । आखिर के भए हामी परिवर्तन हुन्छौं त ? हाम्रो मनस्थितिमा परिवर्तन नआई परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदैन । यस्ता कुरीति र मान्यतामा सकारात्मक परिवर्तन नआउँदासम्म राष्ट्रमा समृद्धिको अनुभूति गर्न सकिँदैन । किनभने हाम्रो दृष्टि नबदलिएसम्म सृष्टि बदलिँदैन । हामीले अरूलाई दोषारोपण गरेर समय बिताइरहने अनि परिवर्तन पनि खोज्ने कुरा सम्भव होला त ? मदर टेरेसालाई १९७९ मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरेपछि सोधिएको थियो–विश्वमा शान्ति कायम राख्न के गर्नुपर्छ ? उहाँको उत्तर थियो–सर्वप्रथम तिमी आफ्नो घर जाऊ अनि आफ्नो परिवारसँग प्रेम बाँड । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि प्रेम, परिवार, शान्ति र समृद्धिमा कुनै विभेद छैन र हुनु पनि हुँदैन । छोरीलाई छोरी भएकै कारणले थोपरिने अनेक संस्कार र बाध्य पारिने कर्महरूभन्दा पनि उनको स्वतन्त्रता र क्षमता अनि प्रतिभाले सत्कर्ममा अघि बढाउने प्रयास गर्ने कि ?
मंसिर १०, २०७६ - स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि बडी बिल्डिङ
कार्तिक २९, २०७६ - राजाराम गौतम ‘नारी’को सम्पादकमा नियुक्त
कार्तिक १९, २०७६ - धेरै खुसी हुनु पनि मुटुका लागि खतरा
कार्तिक ७, २०७६ - रमाइलो र रिफ्रेसमेन्टका लागि आउटिङ
कार्तिक १, २०७६ - डिप्रेसनका लागि योग
आश्विन २८, २०७६ - उच्च रक्तचापका लागि उपयुक्त आहार
दाम्पत्य जीवनमा प्रभाव पार्ने कुराहरू मंसिर २६, २०७६
प्रदर्शन होईन मानवता प्रकट गरौं मंसिर १८, २०७६
यौन तथा प्रजनन् अधिकार मंसिर १६, २०७६
मंसिरजस्तै मान्छे मंसिर १३, २०७६
महिलालाई सफल बनाउने गुण कार्तिक २०, २०७६
बुवाको मुहारमा खुसी हेर्ने दिन भाद्र १३, २०७६